Nhau - Basa rekusuma uye nyaya yekugovana ye LED kuratidza skrini mune zvitoro
Basa rekutanga uye nyaya yekugovana ye LED kuratidza skrini mune zvitoro
Iko kushandiswa kwekushandisa kweiyo LED yekuratidzira skrini mune yezvitoro "vhidhiyo yekutamba basa inogona kuratidza yechokwadi ruvara simba vhidhiyo mufananidzo; inogona kutepfenyura yakavharwa-redunhu TV uye satellite terevhizheni zvirongwa nekuvimbika kwakanyanya; akawanda vhidhiyo chiratidzo yekuisa uye yekubuda nzvimbo: inoumbwa vhidhiyo uye Y / C vhidhiyo (s / C) _ Vhidhiyo, YPbPr, VGA (rgbhv), DVI, HDMI, SDI (HDSDI); vanogona kutamba mapurogiramu evhidhiyo senge VCD, DVD, LD nekuvimbika kukuru; inogona kufukidza zvinyorwa, mifananidzo uye zvinyowani mifananidzo pavhidhiyo skrini; inogona kuona chaiyo-nguva yekugadzirisa uye kutamba mabasa akadai seakazara kuona, padhuze-kumusoro, inononoka kupfura uye yakakosha mhedzisiro kuburikidza nekugadzirisa michina. Kupenya, kusiyanisa, kuzadza uye chroma zvinogona kugadziriswa nesoftware, iine mazana maviri nemakumi mashanu emazinga ekugadzirisa; mufananidzo kutonhora basa; matatu ekuratidzira modhi dzeVGA + vhidhiyo, vhidhiyo uye VGA; yakatwasuka / yakamira chinzvimbo muripo basa; ratidza kuwiriranisa basa.
Makomputa magirafu uye zvinyorwa zvemashoko anotamba basa rinogona kuratidza marudzi ese eruzivo rwemakomputa, zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo uye maviri, matatu-mativi emifananidzo, nezvimwe. ye data ruzivo. Iyo yekuratidzira skrini inogona kumisikidza akawanda windows, kuratidza kalendari uye wachi, uye kuisa imwechete tambo inoyerera zvinyorwa. Kune akasiyana mavara echiChinese uye mafonti kusarudza kubva. Unogona zvakare kuisa Chirungu, Spanish, French, German, Greek, Japanese, Latin, Russian uye mimwe mitauro yekune dzimwe nyika. Iyo nhepfenyuro sisitimu ine multimedia software, iyo inogona kuisa uye kutepfenyura dzakasiyana siyana ruzivo nenzira inoshanduka.
Kune anopfuura makumi maviri mawairesi enzira, kusanganisira kuruboshwe uye kurudyi kutenderera, kukwira nekudzika kutenderera, kuruboshwe uye kurudyi kusunda, kumusoro uye pasi kusundira, diagonal kusundira, kupararira, fan fan, kutenderera, kuyera, etc. Ratidza network data ruzivo kuburikidza netiweki kubatana . Yakashongedzerwa netiweki interface, inogona kubatana nekombuta uye kugovana network zviwanikwa. Iyo ine yakajairwa odhiyo chiratidzo kuburitsa interface kuti uwane audio-visual synchronization.
Iwo emukati ekuratidzira eUS mumashopu ezvitoro ari kunyanya P3 yakazara-kuratidza kuratidza, P4 LED kuratidza, P5 LED yemagetsi kuratidza, P6 yakazara-ruvara LED hombe skrini, nezvimwe.
Hunhu nemutengo misoro isingatombopatsanurwa kubva kune zvigadzirwa. Vatengi vazhinji vane hanya nemutengo padanho rekutanga rekutenga, uye vanogara vachida kuenzanisa nemusika. Muchokwadi, izvi hazvina zvazvinoreva. Zvakafanana neiyo LED hombe skrini zvigadzirwa zvemagetsi, yakatsiga uye yakasimba hunhu, yakanaka yekuratidzira mhedzisiro ndiyo yakajairwa.